Travel requirements updated for St. Kitts & Nevis | Saint Kitts and Nevis travel news
Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba zeSaint Kitts neNevis » Ukuhamba kweemfuno ezihlaziyiweyo zeSt. Kitts & Nevis
Bonke abahambi ngoku kufuneka bathathe uvavanyo lwe-RT-PCR iiyure ezingama-48 ukuya kwezingama-72 ngaphambi kokuhamba
Kitts & Nevis yongeze iMontpelier Plantation & Beach kuludwe lweehotele ezivunyiweyo zokuHamba zabahambi bamanye amazwe. IMontpelier Plantation kunye neBhitshi yindawo yokutyela ehotele eNevis.
Umbutho okwangoku awuzamkeli iimvavanyo ze-RT-PCR zaBahambi baMazwe ngaMazwe, abahlali / abahlali kunye nabangengobemi / abangahlaliyo olwenziwe yiLabCorp. Nceda uqaphele, iimvavanyo ezamkelekileyo ze-COVID-19 PCR kufuneka zithathwe sisampulu ye-nasopharyngeal. Iisampulu ezizimeleyo, iimvavanyo ezikhawulezayo, okanye iimvavanyo zasekhaya ziya kuthathwa njengezingekho mthethweni
Bonke abahambi ngoku kufuneka bathathe uvavanyo lwe-RT-PCR iiyure ezingama-48 ukuya kwezingama-72 ngaphambi kokuhamba.
Zonke ezinye iimfuno zohambo zihlala zingatshintshanga kwaye kufuneka zithunyelwe ngabo baceba uhambo oluya kwi-Federation ngexesha leSigaba 1 sokuphinda kuvulwe.
Bonke abakhweli abangenayo eSt. Kitts & Nevis bayacelwa ukuba bagcwalise iFom yokuGunyazisa uKhenketho, enokufumaneka apha www.knravelform.kn, ngaphambi kokufika kwabo. Abahambi bamanye amazwe kufuneka babe novavanyo olubi lwe-RT-PCR kunye nendawo yokuhlala yokubhukisha ukuze bagcwalise iFom yoGunyaziso loKhenketho efunekayo ukuze kungenwe. Nje ukuba ifom igcwaliswe kwaye ingeniswe, nedilesi efanelekileyo ye-imeyile, iya kuphononongwa, kwaye undwendwe luya kufumana ileta evunyiweyo yokungena kwi-Federation.